Azafady azafady ampiasaina amin'ny taratasy fifandraisanay
Hiverina aminao aminao vetivety izahay!
Raha misy fanontaniana mivantana sy fampahalalana fanampiny azonao tratrarina eto: </a>
Izahay dia miaro ny zon'olombelona ao amin'ny foibenay. Tsidiho izahay any Berlin. Mpiambina 71 - 101
adiresy e-mail (notorina)
PixelHELPER Foundation | zavakanto plastika any Wannsee Berlin, Alemana
Miady ho an'ny tontolo tsaratsara kokoa isika
Misaotra anao noho ny fahaliananao amin'ny PixelHELPER. Ny robotan'ny zanak'olombelona dia misaotra anao noho ny fitsidihanao. Ny robot 4 metatra dia noforonin'ireo mpanakanto ho an'ny mpanome lehibe. Raha manapa-kevitra ny hanohana anay ianao dia afaka mahazo robot toy ny fanomezana. Ny sary sokitra lehibe dia asan'ny zavakanto. Toy ny plastika lehibe vita amin'ny papier-mâché, dia afaka miditra any amin'ny birao, trano fivarotana na orinasa orinasa. Koa raha manana zavatra manokana hiteny aminay ianao, na te-hanome fanampiana amin'ny fikambananay, dia manantena izahay fa hampiseho aminareo ireo fahafaha-manao amin'ny asanay. Ilay olo-bozaka Oliver Bienkowski sy ny ekipany dia nanangana sary sokitra goavam-be 4 metatra mba hahatonga ny ankizy hihomehy sy ho gaga. Ny kintan'ny Youtube Jörg Sprave dia nanamboatra sambo baolina mason'ny voninkazo. Ny rehetra dia avy amin'ny sary sokitra mankany amin'ny fikambanana mpanao asa soa. Misaotra anao nanohana anay.
fifandraisana January 9th, 2020Oliver Bienkowski